सेभेन ए साईड फुटबल प्रतियोगिता जारी - NepalDut NepalDut
बाबुरामलाई कारबाही गर्ने उपेन्द्र पक्षको निर्णय
सबै महानगरका मेयर र प्रमुख कार्यकारीको भेला पोखरामा
कास्कीका पत्रकार फिल्डमै फोटोग्राफी सिक्दै
रविले खोले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
पर्यटन र विकासमा सहकार्य गर्दै पोखरा–भरतपुर
सेभेन ए साईड फुटबल प्रतियोगिता जारी
नेपालदूत , पोखरा
जेठ ८ गते २०७९
पोखरा–१४ जनएकता युवा क्लबको आयोजनामा सञ्चालित प्रथम सेभेन ए साईड फुटबल प्रतियोगतामा शुभकामना क्लबलाई पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित गर्दै कमलपोखरी एफसी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
स्थानीय रामेश्वरी माविको खेल मैदानमा भएको प्रतिस्पर्धामा निर्धारित समयमा दुवै टोलीबाट २–२ गोलको बराबरीपछि निर्णय पेनाल्टी सुटआउटमा गरिएको थियो । पेनाल्टी सुटआउटमा कमलपोखरीले शुभकामनालाई २–० गोलले पराजित गरेको थियो । पेनाल्टी सुटआउटमा शुभकामनाका किरण कार्की र सनम केसीले गोल गर्न चुकेपछि दोस्रो चरणको यात्रा तय गर्नबाट बन्चित हुन पुग्यो । कमलपोखरीका लागि सलिन गुरुङ र अजय गुरुङले गोल गरेका थिए ।
निर्धारित समयमा दोस्रो मिनेटमा कमलपोखरीका आत्मघाती गोल गरेपछि शुभकामनाले अग्रता लिएको थियो । अजय गुरुङले खेलको १५ औां गोल गर्दै बराबरी गरे । २६ औं मिनेटमा जीवन गुरुङ कमलपोखरीले गोल । शुभकामनाका ४२ औं किरण कार्कीले गोल ।
दोस्रो खेल भक्कु एफसी विरुद्ध विरौटा एफसीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा भक्कु एफसीले ४–१ गेलले पराजित गरेको छ । भक्कुको लागि मनोज गुरुङले दुई तथा मिन गुरुङ र सरोज तितुङले एक गोल गर्दा विरौटाका लागि अनुज भण्डारीले एक गोल गरेका थिए । मनोज खेलमा म्यान अफ दि म्याच घोषित भए ।
तेस्रो खेलमा मसिना एफसीले विजय बस्तीलाई ११–० को फराकिलो गोलले पराजित गर्यो । फराकिलो जित दर्ता गर्ने क्रममा मसिनाका सुनिल घोतानेले त्रिपल ह्याट्रिक(९ गोल) गरे । दुई गोल भने विजय श्रेष्ठको नाममा रह्यो । खेलमा घोताने म्यान अफ दि म्याचबाट पुरस्कृत भए । चौथो खेलमा आर्दश युवा क्लब भण्डारढीकले जी–९ युनाईटेड एफसीलाई १०–० गोलले पराजित गरेको छ ।
आर्दशका लागि अमृत कुँवरले ५ गोल गरे । विकास परियारले २ र विसन गुरुङ, अर्जुन गुरुङ र अर्जुन मगरले एक गोल गरेका थिए । पाँचौ खेलमा जनएकता क्लब एले काजीपोखरी एफसीलाई पेनाल्टी सुटआउटमा ३–२ गोलले पराजित गरेको थियो छैटौ खेलमा समावेशी एफसीले मसिना एफसी पहेलों विरुद्ध खेल्यो ।
मसिना एफसी पहेंलोले समावेशीलाई ३–० गोलले पराजित गर्ने क्रममा सन्जु नेपालीले २ र सिद्धान्त गुरुङले १ गोल गरेका थिए । प्रतियोगितामा ४६ क्लबको सहभागिता रहेको छ । प्रतियोगिताको गण्डकी खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव तेजबहादुर गुरुङले उदघाटन गरेका थिए । प्रतियोगितामा विजेताले नगद १ लाख ११ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने छन् । उपविजेताले ६१ हजार १ सय ११ रुपैयाँ प्राप्त गर्ने छन् ।
उत्कृष्ठ खेलाडीले नगद ५ हजार प्राप्त गर्ने छन् । त्यसैगरी उत्कृष्ट गोलकिपर, सर्वाधिक गोलकर्तालाई नगद ३÷३ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने क्लबका सचिव घनश्याम अधिकारी(श्याम)ले जानकराी दिए
अपांगका सरोकारबारे छलफल
शिशुवामा सुरु भयो युआरएल
संक्रमणकालीन न्यायबारे नागरिक संवाद
नीति तथा कार्यक्रममा नभएकाले बजेटमा संसद विकास कोष आएनः बराल
हिमाल र उषा बने पोखरा राष्ट्रिय साइक्लिङ च्याम्पियन
पोखरा ८ मा योजना तर्जुमा गोष्ठी
नेपालदुत पाठकसम्म समाचार, सूचना, विचार र मनोरञ्जन पुर्याउने डिजिटल दुत हो । यो समाचार पोर्टलले विचार, विश्लेषणमा सिमित नरही खोजी पत्रकारितालाई पनि बढाबा दिने लक्ष्य राखेको छ । विकास, निर्माण, समाज परिवर्तनका लागि भएका सकारात्मक पक्षहरु उजागर गर्दै सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं…
सञ्चालक/सम्पादक : सुनिल पाण्डे
प्रधान सम्पादक : फडिन्द्र अकिञ्चन
संवाददाता : अनिषा बराल
पोखरा–८, न्युरोड, कास्की
फोन नं. : 061-520214
सूचना तथा प्रशारण विभाग दर्ता नं. १११४/०७५/०७६